Omama njalo ukhathazeke izingane zabo. Bafuna inzalo abangu enempilo, yimpumelelo, umkhaya wakubo savela iqinile futhi bahlale bejabule. ayazisa kakhulu, abhekane Izifiso zazo ejulile ongumama ukuba sobukhosi sikaNkulunkulu, ujike ngomthandazo eNcasakazini uMariya.
Nomthandazo izingane - kuyini? Yiqiniso, zikhona izinto ezahlukene ongazikhetha. Life - into eyinkimbinkimbi ezingalindelekile. Futhi izimo zinzima ngokwedlulele zenzeka kuwo, ezifana abalobi yesayensi musa zibheda. Futhi abantu ngazo zonke izindlela ezidingekayo ukuze uthole kuzo. Ngoba umthandazo izingane liphume, mhlawumbe ukudlula noma yibaphi abanye.
Yiqiniso, okokuqala kunakho konke, ucele impilo umama. ingane Okuningi engazalwanga, nonina kwaba kakade ukukhathazeka nani, ngakho yaba ngokuvamile esibelethweni ukuze ukukhanya uvele lula, ngaphandle izinkinga. Njengoba nje uzwa ukukhala lokuqala olusana (futhi wonke Eminyakeni eyalandela), amazwi omthandazo wokuba impilo yezingane waba isiko kwansuku zonke.
Uma ingane iyagula into ebucayi, Yiqiniso, abazali, zonke izihlobo okucelayo emandleni aphakeme singcono zalo zokuqala. Emasontweni umyalo wokuba okukhethekile ukuze bagubhe ngokuzila ukudla kanye nezinye izimfanelo ezidingekayo. Kodwa-ke umthandazo ngoba unina wezingane ubhekwa le talisman ezinamandla kakhulu futhi ejenti zokuzivikela ezisezimweni ezinzima kakhulu.
Izingane zakhe ezindala, kanjalo, yebo, avele izinkinga ezengeziwe. Abazali bafuna nenzalo yabo wakhula ezolile, ukucabangela, bakhuthele. Ukuze uyokujabulela ukufunda, zibasize endlini, musa hang out emigwaqweni nasezindaweni izinkampani ezingabazisayo ungazange waqala ukuphuza, ukubhema nokunye. D. Nakulokhu futhi, flying ezulwini ethandaza iNcasakazi izingane, iseluleko sabo, ukuthi amaphutha ebulalayo ngaphansi izimisele.
Kuqondane ukuthi phakathi kwabazali nezingane kukhona udonga nalutho kwenzondo, ukungaqondi. Pho-ke, singathandaza unina? Yiqiniso, inhliziyo ukunciphisa ingane yabo. Ukuthethelela, uma abazali baba necala, ngaqaphela misdeeds yakhe. Lokho nomuzwa wokuthi uma izimo wasihlukanisa. Lokho bazama ukusiza labo abantu ababazisa eseyingane, wayetshala ebusheni bakhe, kodwa manje undeservedly ukhohliwe. Uma izingane uxhashazwa unina ubuhlungu ngokungafanele, basuke cashing udweshu ezingeni karmic. Nomthandazo abanezingane ngakolunye uhlangothi, kunciphisa inani ongathandeki, futhi ngakolunye - kuyinto ukukhala umphefumulo, ohlushwa ukucindezeleka ngokomzwelo e krovinushku yabo. Spoken ngobuqotho, ngobuqotho benhliziyo, bazokusiza.
Kukhona imithandazo esuka ejele ingane waphunyuka lokhu kwabelana esabekayo. Imithandazo yokucela ekwenzeni umshado uphumelele: indodana unkosikazi ithole nothandekayo kuye, ehloniphekile, umngenisi wezihambi omuhle, olunembile futhi ngokucophelela, azihambi; kumyeni indodakazi yakhe yayiziphatha ngendlela kanzima-working, ukungaphuzi, ukusiza, berog, wayemthanda, wanakekela nabanye besifazane akaziqhathululanga; ukuthi le ndlu yayingakakulungeli ethokomele, inkomishi egcwele, ukuze singathwesi usizi izingane penny abalwa.
Isikhathi sekukaningi abazali, futhi iningi omama lapho izingane zabo zenza izidleke zabo siqu. Ngezinye izikhathi unomona izingane zabo umngane wabo womshado efundelwa. Futhi ngokuvamile kakhulu cela umama kaNkulunkulu, ukuze usesize yokuthuthukisa ubuhlobo nendodakazi noma ngumkhwenyana. Lokho ilungu elisha lomkhaya wabo waba indodana iqiniso noma indodakazi.
Futhi abazukulu - eyodwa ngaphezulu kubalulekile omama nobaba mayelana nodaba lwamanje izingane. ngempela Umama ufuna amadodana abo namadodakazi abo bekungakabhekwana engenazithelo, baletha izingane, thina waphila ngokuvumelana. Futhi uma kukhona izinkinga kule ngesisekelo, bese ziya zezindela namathempeli, ukuvikela impilo, thandaza. Futhi akukho amandla ezingase simelane umthandazo oqotho umama!
Celani, yikhona niyophiwa kuwe!
Lo mlingisi Bochkin Igor Ivanovich: Filmography, biography, izithombe. ukuphila komuntu inkanyezi